नाच्न आँउछ? आँउछ भने जित्ने हैन त नगद १ लाख रुपैँया पुरस्कार ? – Gulmiews
नाच्न आँउछ? आँउछ भने जित्ने हैन त नगद १ लाख रुपैँया पुरस्कार ?
गुल्मी, असार ३० । रुपन्देहीको धुम कला केन्द्र वुटवलले आयोजना गरेको चान्समाडान्स अञ्चल व्यापी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने नृत्यकारलाई १ लाख राशीको पुरस्कार राखिएको छ । यति वेला लुम्विनी अञ्चल भित्रका जिल्लाहरुमा प्रतियोगी छनौट गर्दै हिँडेको आयोजक टोली आज गुल्मी जिल्ला आईपुगेको छ । सदरमुकाम तम्घासको वालमन्दिर सभाहलमा भव्य नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरी
केहीलाई अञ्चाल व्यापी प्रतियोगितामा जानका लागि छनौट गरेको छ । धुम कलाकेन्द्र वुटवलका प्रवन्ध निर्देशक माईकलदेव दर्लामीले पाल्पा सकेर गुल्मी आएको र अर्घाखाँची हुँदै कविलवस्तुका प्रतियोगी छनौट गदैं गण्डकी अञ्चल पुगिने बताए । यि दुई अञ्चलभरका प्रतियोगीहरुको अन्तिम प्रतिष्पर्धा असोज ३ गते वुटवलमा हुने उनले जानकारी दिए ।